Hello Nepal News » रोनाल्डोले आज राति क्रोएसियाविरुद्ध खेल्ने सम्भावना कति ?
रोनाल्डोले आज राति क्रोएसियाविरुद्ध खेल्ने सम्भावना कति ?
युइएफए नेसन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा आज राति साबिक च्याम्पियन पोर्चुगल र क्रोएसियाले आफ्नो पहिलो खेल खेल्दैछन् । पोर्चुगलको घरेलु मैदानमा हुने सो खेलमा कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो नखेल्ने पक्का भएको छ । रोनाल्डोले चोटका कारण सो खेल गुमाउने भएका हुन् ।
प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोषले क्रोएसियाविरुद्ध खेल्ने प्रारम्भिक टोली घोषणा गर्दा रोनाल्डो छैनन् । ३ दिनअघि रोनाल्डो प्रशिक्षण दौरान घाइते भएका थिए । उनको खुट्टाको औंलामा चोट परेको छ । चोटकै कारण रोनाल्डो क्रोएसियाविरुद्धको खेल गुमाउने भएका हुन् ।
रोनाल्डोका लागि व्यक्तिगत रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको यो खेल गुमाउँदा उनले आजै राति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा १०० गोल गर्ने अवसर गुम्ने भएको छ । यदि आज राति रोनाल्डो खेलेको भए उनले फुटबल इतिहासमा १०० गोल पूरा गर्ने थिए । र, १०० गोल गर्ने पहिलो सक्रिय खेलाडी बन्ने थिए ।
अब रोनाल्डोले १०० गोलका लागि अर्को खेलसम्म पखिर्नुपर्नेछ । रोनाल्डो अर्को खेलमा भने उपलब्ध हुने अपेक्षा छ । आजको खेल भएको ३ दिनपछि पोर्चुगलले स्वीडेनसँग दोस्रो खेल खेल्नेछ । यदि रोनाल्डोको चोटमा चाँडो रिकभर भए उनले सो खेल खेल्नेछन् । रोनाल्डोले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा ९९ गोल गरिसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति २० भाद्र २०७७, शनिबार १२:५१